सुनको मूल्य आकासियो, आज कतिमा हुदैछ कारोवार ? - ramechhapkhabar.com
सुनको मूल्य आकासियो, आज कतिमा हुदैछ कारोवार ?
काठमाडौं – आज आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य फेरी बढेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला ९४ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ ।
गत शुक्रबारको तुलनामा आज आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला २०० रुपैयाँले बढेको हो । महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार १०० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ ।
गत शुक्रबार प्रतितोला १ हजार २८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज १० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार २९५ रुपैयाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
सोल्टी होटेलले डाक्याे साधारण सभा, शेयरधनीकाे हात खाली
सोल्टी होटेल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेकाे छ । कम्पनीकाे असाेज २२ गते, बिहीबार बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले गरेकाे निर्णय अनुसार कम्पनीकाे ४७औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर २८ गते, मंगलबार, कम्पनीकाे रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचल, काठमाडाैँमा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ ।
कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेकाे छैन । त्यसैले, कम्पनीका शेयरधनीहरूकाे हात खाली हुने भएकाे छ ।
सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, (Financial Statements), २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा-नोक्सान हिसाब (नाफा बा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण), नगद प्रवाह विवरण (नगद प्रवाहको विवरण), तथा ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने, कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, कम्पनीको संचालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित भएका संचालकहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने, संचालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरु बाहेकका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट तीन जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने प्रस्तावहरू पारित हुनेछ ।
त्यसैगरी, साधारण सभा प्रयाेजनका लागि कम्पनीले मंसिर ६ गतेदेखि मंसिर २८ गतेसम्म बुकक्लाेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । त्यसैले, मंसिर ५ गतेसम्म नेप्सेमा काराेबार भई कायम भएका शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।